Wasiirka arrimaha Gudaha oo amar ku bixin in deg deg loosoo xulo Xildhibaanada Galmudug - Awdinle Online
Wasiirka arrimaha Gudaha oo amar ku bixin in deg deg loosoo xulo Xildhibaanada Galmudug
November 28, 2019 (AO) – Warar aanu ka heleyno Galmudug ayaa sheegey in Wasiirka Arrimaha gudaha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Eng. Cabdi Maxamed Sabriye oo ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug uu kulan la qaatay guddiga Farsamada iyo Maamul u dhisida Galmudug ee Wasaaradda arrimaha gudaha ay Magacaawday.
Kulankan ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo amba qaadi lahaa dhismaha Galmudug loona soo xuli lahaa Xildhibaannada Cusub oo ay yeelaneyso Dowlad Gobaleedka Galmudug.
Wasiir Cabdi Sabriye ayaa Guddiga farsamada maamul u dhisidda Galmudug kula dardaarmay in ay dardargeliyaan dadaalada soo xulista xildhibaanada si loo dhameystiro geedi socodka dhismaha Galmudug loo dhanyahay.
Kulabka Wasiirka Magaalada Dhuusamareeb kula qaatay Guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xili hoggaanka Ahlu-sunna ay saluugsan yihiin sida ay dowladda wax u wado iyo qaabka dhismaha Galmudug.
Guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug ayaa maalma ka hor waxaa ay soo saareen Jadwalka doorashada Galmudug taas oo khilaaf Cusub ka dhex-abuurtay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusunna.
Previous articleDowladda Federaalka ah oo joojisay Qorista shaqaale cusub
Next articleFAA’IIDADA LAGA HELO LIIN-DHANAANTA